सागका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीको लकडाउन डायरी « Naya Page
प्रकाशित मिति : April 15, 2020
काठमाडौँ, ३ वैशाख । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन आदेश जारी गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नेपाल पनि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै लकडाउनलाई थप कडा बनाउँदै लगेको छ । भने चौथो पल्ट मङ्गलवार वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ ।
अहिले नेपालमा १६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै नेपाली जनजीवन परिवर्तन भएको । हरेकको क्षेत्रको गतिविधि ठप्प छ । सहर क्षेत्रमा मानिसहरू सेल्फ आइसोलेसनमा छन् । यस अवस्थामा नेपाली खेलकुदका खेलाडीको दैनिक कस्तो छ ? १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)मा स्वर्ण पदक खेलाडीहरू कहाँ के गर्दै छन् त ?
मण्डेकाजी श्रेष्ठ, नेपाल पुलिस क्लब
साग खेलकुदमा दुई वटा स्वर्ण पदक विजेता कराँतेका खेलाडी मण्डेकाजी श्रेष्ठको घरैमा दिन बितिरहेको छ । उनी घरै सेल्फ प्रशिक्षण गरिरहेको बताउँछन् । उनले ‘कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण पालना गरिरहेको छु, घरैमा सेल्फ ट्रेनिङ गर्दे र परिवारलाई समय दिएर दिनहरू विताइरहेको छु, यस अवस्था सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु पनि म सबैमा अनुरोध गर्छु ।’
संगीता मगर, त्रिभुवन आर्मी क्लब
कराँतेकी संगिता मगर अहिले हेटौँडाको सुपारेटार ब्यारेक (मध्य पृतना हेडक्वार्टर) मा ड्युटीमा खटिएकी छिन् । ट्रेनिङ, साथीभाइ र विशेष गरी आफ्नो सागका टिमलाई धेरै मिस गरिरहेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘सबै साथीहरूसँग फेसबुकमा कुरा त हुन्छ, सङ्गीत नेपाली सेनाकी खेलाडी हुन् । तर, अहिले उनीमाथि खेलसँगै अन्य जिम्मेवारी थपिएको छ । उनले खेल अभ्यास गर्न भने नपाएको सुनाइन् ।
जुनी राई, नेपाल पुलिस क्लब
उसुकी जुनी राई आजकल घरैमा सेल्फ प्रशिक्षण छिन् । उनी लकडाउनको समयमा बिहान, बेलुका सेल्फ ट्रेनिङ र दिउँसोको समयमा पुस्तक पढेर समयको सदुपयोग गरिहेको बताउँछिन् । उनले ‘कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण पालना गरिरहेको छु, यस अवस्था सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु पनि म सबैमा अनुरोध गर्छु ।’
पुनम श्रेष्ठ, त्रिभुवन आर्मी क्लब
जुडोकी पुनम श्रेष्ठे छतमा बसेर दुई घण्टा सेल्फ ट्रेनिङ गरिरहेकी छिन् । बाँकी समय पुस्तकहरू पढ्दै र आमासँग समय बिताइरहेकी बताउँछिन् । उनले भनिन्,‘अहिले घरमै बसिरहेको छु । अहिले म तयारी अवस्थामा बसिरहेको छु ड्युटी गर्न निर्देशन आउने बित्तिकै ड्युटी जाने बताइन् ।’
निमा घर्तीमगर, त्रिभुवन आर्मी क्लब
उसुकी निमा घर्तीमगर लकडाउनको समयमा आफूलाई फिट राख्न बिहान, बेलुका सेल्फ ट्रेनिङ गर्छिन् । दिउँसो आमा, बाबा बसेर समयको सदुपयोग गरिरहेको बताइन् । फुर्सदको बेला मोबाइल चलाउने समाचार हेर्ने गर्छिन् । उनी कहिलेकाहीँ आमा बाबालाई घरकै काममा सहयोग गर्ने गरिरहेकी छिन् ।
नवीन रसाइली, नेपाल पुलिस क्लब
कराँतेका खेलाडी नवीन रसाइलीको पनि दैनिकी परिवर्तन भएको छ । जापान ओलम्पिकको समेत तयारी गरिरहेका उनी उनी घरैमा सेल्फ प्रशिक्षणमा सीमित भएका छन् । उनी घरैमा सेल्फ ट्रेनिङ गर्दे र परिवारलाई समय दिएर दिनहरू बिताइरहेको बताउँछन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले उनले दैनिकरुपमा ४ बजेबाट ५ बजेसम्म भिडीयोमा प्रशिक्षण लिइरहेको बताए ।